Madaxweynaha Somaliland oo maalinta Salaasada u muddeeyey Fadhiga ugu horeeya ee Golaha Wakiillada Cusub | Somaliland Post
Home News Madaxweynaha Somaliland oo maalinta Salaasada u muddeeyey Fadhiga ugu horeeya ee Golaha...
Madaxweynaha Somaliland oo maalinta Salaasada u muddeeyey Fadhiga ugu horeeya ee Golaha Wakiillada Cusub
Hargeysa (SLpost)- Golaha Wakiillada cusub ee Somaliland, ayaa maalinta Saalada ee todobaadkan yeelanaya fadhigoodii u horeeyey, sida uu sheegay Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo xeer-madaxweyne ku muddeeyey wakhtiga ay yeelanayaan fadhigooda.
Sida uu dhigayo Dastuurka Somaliland, madaxweynaha ayaa muddo bil gudaheed ah, oo ka soo bilaabmaysa maalinta ay Maxkamadda Sare Ansixiso natiijada rasmiga ah ee Doorashada iyo xildhibaannada ku soo baxay, waxa uu ku muddeynayaa xilliga uu noqonayo fadhiga ugu horreeya ee goluhu isugu imanayo.
Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa 07/07/2021 ansixisay, isla markaana si rasmi ah ee Doorashada Golaha Wakiillada Somaliland oo dalka ka qabsoontay 31-kii May 2021-ka.
Haddaba, madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta soo saaray Xeer uu ku muddeeyey wakhtiga uu goluhu qabsanayo fadhigooda u horreeya oo uu u cayimay maalinta Saalasada oo ku beegan 3-da bishan August 2021.
Wareegtada madaxweynuhu ku shaaciyey xeerka madaxweyne ee uu isugu yeedhay xildhibaannada golaha Wakiillada cusub, ayaa u qornaa sidan:-
“Xeer Madaxweyne Lr. 13/082021
In Fadhiga ugu horreeya ee Golaha Wakiillada cusub ee dhawaan la doortay uu qabsoomo maalinta Salaasada ee ku beegan 03/08/2021, saacaddu marka ay tahay 09:00 Subaxnimo. Fadhigaasina waxa uu ka qabsoomi doonaa Xarunta Golaha Wakiillada ee Caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland.” Sidaas ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi.